Body Building Body Beauty & Fitness | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Body Building Body Beauty & Fitness | Hlaing
Body Building Body Beauty & Fitness
Body Building Body Beauty & Fitness ကို တိုက် ၂၇၊ အခန်း ၁၀၂ ၊ပထမထပ်၊ ရတနာမွန်လမ်း ( လှိုင်ဘူတာရုံလမ်း ) ၊၅ ရပ်ကွက် ၊လှိုင်မြို့ နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့  တွင် 2013 ခုနှစ်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်ခန္တာ ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်း အဆီကျ ကျန်းမာလှပလိုသော လူကြီးလူငယ် ၊အမျိုးသား အမျိုးသမီးများအတွက် ခေတ်မှီစက်ကိရိယာစုံလင်စွာဖြင့် Fitness service အမျိုးမျိုးကို ကျွမ်းကျင် trainer များမှ စနစ်တကျ သင်ကြားပြသပေးလျက်ရှိပါသည်။ မန်ဘာကြေးများမှာ တစ်လ 20000 ကျပ် ၊သုံးလ 50000 ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရက်ကြေးမှာ 1500 ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ မနက် 6:00 မှ ည 8:00 အထိ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါပြီး တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ပိတ်ပါသည်။
06:00 AM - 08:00 PM ( ပိတ်သည် တနင်္ဂနွေနေ )
No 27, Room 102, 1st floor, Hlaing Train Station Road, Hlaing Township, Yangon
အနီးအနား ဘုရင့်နောင်မှတ်တိုင် မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Body Building Body Beauty & Fitness Body Building Body Beauty & Fitness is located at No 27, Room 102, 1st floor, Hlaing Train Station Road, Hlaing Township, Yangon since 2013. The fitness performs numerous fitness services for both ladies and gents with excellent facilities including Professional Trainers, Fitness program, Diet guide lines and many more. Membership fees of this fitness are reasonable that are one month for 20000 kyats and 3months for 50000 kyats. Daily fee will be 1500 kyats. Open 6:00 AM to 8:00 PM and Sunday is closed. You are invited to visit and enjoy.
Linn Lat Kyal Beauty Training School
Thone Thone Professional Beauty Salon
A Lin Professional Hair Design & Beauty Spa
Mori Beauty & Spa